ASEANနိုင်ငံမှကျောင်းသားများအတွက် အိုကာယာမတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၏ ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (Preliminary Education in Oct. 2021 + Undergraduate Admission in April 2022)
ASEANနိုင်ငံမှကျောင်းသားများအတွက် အိုကာယာမတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၏ ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (Preliminary Education in Oct. 2021 + Undergraduate Admission in April 2022) ။ (ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်၊ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ယခုပရိုဂရမ်ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။) ✳️လျှောက်ထားနိုင်သည့်ကာလ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့ မှ မေလ(၁၄)ရက်နေ့အထိ။ ✳️ ပေးအပ်မည့်ပညာသင်ဆု လစဉ် - ယန်း၁၁၇,၀၀၀ကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်အစိုးရပညာသင်ဆုရကျောင်းသားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူသည် ကျောင်းဝင်ကြေးနှင့်ကျောင်းလခ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။(အိုကာယာမတက္ကသိုလ်မှ ကျခံမည်ဖြစ်ပါသည်။) ✳️ပညာသင်ဆုပေးမည့်ကာလ စုစုပေါင်းပညာသင်နှစ် (လေးနှစ်ခွဲ) အတွက်အကျုံး၀င်သည်။ (Preliminary Education ၆လ + တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုတန်း၄နှစ်) ✳️ လျှောက်ထားနိုင်သည့်အရည်အချင်းများ။ အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူဖြစ်ရပါမည်။ (1) အောက်ပါအချက်များမှ တစ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူဖြစ်ရပါမည်။ ① လျှောက်ထားသူများသည် ကျောင်းပညာရေး ၁၂ တန်း ကိုပြီးဆုံးထားရပါမည်။(ကျောင်းဝင်ချိန်တွင် အထက်ပါအရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူသည်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။) ② လျှောက်ထားသူများသည် ဂျပန်ရှိအထက်တန်းကျောင်းနှင့်ညီမျှသောကျောင်းကို ပြီးစီးထားရပါမည်။ ③ အထက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းများအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသူ ဖြစ်ရပါမည်။ (2) စည်းမျဉ်းအရ လျှောက်ထားသူသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၂ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်ရပါမည်။ ✳️ ဘာသာစကားလိုအပ်ချက်များ လျှောက်ထားသူများသည် ဂျပန်ဘာသာစကားအရည်အချင်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်များအနက် တစ်ချက်ချက်ကိုပြည့်မီရပါမည်။ အောက်ဖော်ပြပါအင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းရှိသည့် လျှောက်ထားသူများကိုလည်း အထူးကြိုဆိုသည်။ ဂျပန်ဘာသာစကား ①လျှောက်ထားသူသည် ဘွဲ့ကြိုပုံမှန်အတန်းစတင်ချိန်တွင်ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အနည်းဆုံး N2 level ရှိရပါမည်။ (ဝင်ခွင့်အကြိုပညာရေးအတန်းအစတွင် ထိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရရှိသေးသည့်လျှောက်ထားသူများကိုလည်းလက်ခံပါသည်) ။ ②လျှောက်ထားသူသည်အမှတ်စဉ်①တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းနှင့်ညီတူ သို့မဟုတ် အထက်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ရပါမည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ① လျှောက်ထားသူသည် Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) B1 level နှင့်အထက်ရှိရပါမည်။ ②လျှောက်ထားသူများသည် အိုကာယာမတက္ကသိုလ်၏ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဓိကသင်ကြားပြီးစီးခဲ့သူဖြစ်ရပါမည်။ ③ လျှောက်ထားသူသည်အမှတ်စဉ်①တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းနှင့်ညီတူ သို့မဟုတ် အထက်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ရပါမည်။ ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန် အိုကာယာမတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးနှင့်ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ qgg8286@adm.okayama-u.ac.jp ကျေးဇူးပြု၍ဆက်သွယ်စုံစမ်းရာတွင် တတ်နိုင်သမျှ ဂျပန်စာကို အသုံးပြုပေးပါ။ TEL: +81-251-8286, 8287 (ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့်သာ) https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/news/news_id10064.html စိုက်ပျိုးရေးပညာဌာနအကြောင်း https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/eng/outline12.pdf ဗီဒီယိုမိတ်ဆက် http://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/eng/about_faculty_of_agriculture/Introduction_Movie.html
Honjo International Scholarship Foundation ၏ ပညာသင်ဆုခေါ်ယူခြင်း
🌸Honjo International Scholarship Foundation🌸 Guideline of the Application for Foreign Students’ Scholarship in 2021 Application Period: April 1 ~May 5, 2021 1.	ဤပညာသင်ဆုသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိဘွဲ့လွန်အတန်းတွင် တက်ရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားပညာတော်သင်ကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်သောပညာသင်ဆုဖြစ်ပါသည်။ 2.	2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလပိုင်းတွင် စတင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 3.	ပညာသင်ဆုကြေးကို ပြန်ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ 4.	အောက်ပါငွေပမာဏအတိုင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (1)	¥200,000 per month for1 or2years (2)	¥180,000 per month for3years (3)	¥150,000 per month for4or5years ***သတိပြုရန်မှာ ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်အောက်သာကျန်ရှိသူသည် လျှောက်ထား၍ရမည်မဟုတ်ပါ။ 5.	ထို့အပြင် International Conference များတက်ရောက်ရန် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့သည့်စည်းမျဉ်းအပေါ်အခြေခံ၍ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 6.	ဤပညာသင်ဆုကိုလက်ခံထားသူများသည် အခြားပညာသင်ဆုကို လက်ခံ၍မရပါ။ 7.	ဤပညာသင်ဆုလက်ခံထားချိန်ကာလအတွင်းတွင် အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုပါ။ သို့ရာတွင် teaching assistant၊ research assistant စသည့် တက္ကသိုလ်၊ သုတေသနနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်များနှင့် international exchange affairs နှင့်ဆက်စပ်သည်များတွင် ခေတ္တခဏဘာသာပြန်၊ စကားပြန်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုခွင့်ပြုပါသည်။ 8.	ဤပညာသင်ဆုလက်ခံထားချိန်ကာလအတွင်းတွင် လစဉ် တစ်ဦးချင်းအင်တာဗျူးအပြင် အဖွဲ့အစည်းမှကျင်းပသော Events များကို ပါဝင်စေလိုပါသည်။ 9.	ဘွဲ့လွန်အတန်းပြီးမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Alumni events များကိုတက်ရောက်စေလိုပါသည်။ လိုအပ်သည့်အချက်များ (အောက်ပါအချက်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီရမည်။) 1.	ဂျပန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူဖြစ်ရပါမည်။ 2.	2021ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ သို့မဟုတ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျောင်းဝင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူ။ 3.	Professional Graduate School တက်ရောက်သူများကို စည်းမျဉ်းအရလျှောက်ထားခွင့်မပြုသော်လည်း၊ သုတေသနအစီအစဉ် (Research Plan) ကို တင်နိုင်သည့်အခြေအနေဆိုပါက လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 4.	ပညာသင်နှစ် ၁၂လအထက် ကျန်ရှိသူ။ 5.	PhD Program ဆိုလျှင် အသက် ၃၅ နှစ်အောက်။Master’s Program ဆိုလျှင် အသက် ၃၀ နှစ်အောက်။ 6.	ဘွဲ့လွန်အတန်းပြီးမြောက်ပြီးနောက် မိမိတိုင်းပြည်တွင် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသူ။ 7.	Foundationမှ ကျင်းပသည့် ပွဲများကို တက်ရောက်နိုင်သူ။ 8.	ဂျပန်ဘာသာစကားကို နေ့စဉ်စကား အဖြစ် ပြောဆိုနိုင်သူ။ (အင်တာဗျူးကို ဂျပန်ဘာသာဖြင့်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။) လျှောက်ထားရန်နည်းလမ်းများ 1.	Web Application System (https://entry.hisf.or.jp) ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို Upload လုပ်ပါ။ 2.	ဖြည့်သွင်းခြင်းအောင်မြင်ပါက application number ပြန်လည်ရရှိပါမည်။ အောင်မြင်သည့်ကျောင်းသား၏နံပါတ်ကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ််စာမျက်နှာတွင်ပြန်လည်ကြေညာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ Guidelines: https://www.hisf.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/2021_Fall_bosyuyoukou_foreigner-1.pdf Website: https://www.hisf.or.jp/en/scholarship/foreigner/ Inquiries to: info@hisf.or.jp
Asia University၏ ASEANနိုင်ငံမှကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆုခေါ်ယူခြင်း
✨✨ Call for Scholarship ✨✨ Asia University Scholarship for the students from ASEAN Countries (2022 April Intake, Undergraduate Course, Course-A) ✳️ ပေးအပ်မည့်ပညာသင်ဆု Course A - ကျောင်းစရိတ်၅နှစ်စာနှင့် အဆောင်လခ၂နှစ်စာကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Course B - ကျောင်းစရိတ်၄နှစ်စာနှင့် အဆောင်လခ၂နှစ်စာကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ✳️လျှောက်ထားနိုင်သည့်ကာလ Course A - ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ရက်နေ့အထိ။ Course B- Course B အတွက် Application Schedule ကို ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်းမှ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ✳️ တက်ရောက်ရမည့်ကာလ Course A - ပညာသင်နှစ် ၅နှစ် (Intensive Japanese Course ၁နှစ် + ဘွဲ့ကြိုတန်း၄နှစ်) ကို တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Course B - ပညာသင်နှစ် ၄ နှစ် (ဘွဲ့ကြိုတန်း၄နှစ်) ကို တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ✳️ လျှောက်ထားနိုင်သည့်အရည်အချင်းများ ၁။ လျှောက်ထားသူသည် အာဆီယံနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ ၂။ လျှောက်ထားချိန်တွင် မြန်မာအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ကာ၊ A.	၂၀၂၂ခုနှစ်မတ်လ မတိုင်ခင်တွင် ကျောင်းပြီးမည့်သူဖြစ်ရမည်။ (သို့မဟုတ်) B.	၂၀၂၀ခုနှစ်မတ်လ၂၀ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်မတ်လ၁၉ရက်နေ့အတွင်းတွင် မြန်မာအစိုးရအထက်တန်းကို ပြီးဆုံးအောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရပါမည်။ ၃။ International School မှကျောင်းသားဆိုပါက ၂၀၂၂ခုနှစ်မတ်လ မတိုင်ခင်တွင် ကျောင်းပြီးမည့်သူ သို့မဟုတ် ၂၀၂၀ခုနှစ်မတ်လ၂၀ရက်နေ့ မှ၂၀၂၁ခုနှစ်မတ်လ၁၉ရက်နေ့အတွင်းတွင် ၁၂တန်းပညာရေး သို့မဟုတ် IGCSE A Level ကို ပြီးဆုံးထားသူဖြစ်ရပါမည်။ ၄။ Course A လျှောက်ထားချိန်တွင် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ JLPT N4 သို့မဟုတ် N3 ကိုအောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရပါမည်။ Course B လျှောက်ထားချိန်တွင် ဂျပန်စာအဆင့် JLPT N2 သို့မဟုတ် N1 ကိုအောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရပါမည်။ ✳️လျှောက်ထားနိုင်သည့်ဘာသာရပ်များ Faculty of Business Administration Faculty of Economics Faculty of Law Faculty of International Relations Faculty of Multicultural Communication Faculty of Urban Innovation အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Asia University International Center Contact : kkcis@asia-u.ac.jp (Japanese or English available) Website : http://ijc-asia-u.com/scholarship_program_asean https://www.asia-u.ac.jp/english/